अमेरिकी डलरसँगको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ (नेरु) कमजोर हुने क्रम अझै थामिएको छैन । पछिल्ला केही दिनयता लगातार डलर बलियो बन्दै गइरहेको छ भने नेरु कमजोर ।
महिला उद्यमीलाई विश्वास जित्ने चुनौती
सफल व्यवसायको सूत्र के होला ? यसमा पनि महिला व्यवसायीले कसरी फड्को मार्न सक्लान् ? यी प्रश्नको जवाफमा बेलायतकी व्यवसायी एवं लेखिका सेलिया गेट्सले भनिन्, ‘सफल हुनका लागि हामीलाई क्यास होइन कनेक्सन र क्रेडिबिलिटी चाहिन्छ ।’
कुनै बेलाका खच्चड मालिक हाल गाडी साहु । सडकले उनीहरूलाई खच्चडबाट गाडी मालिकमा रूपान्तरण गरिदियो । केही लगानीसँगै आम्दानी पनि बढयो ।
निजी लगानीमा निर्माणाधीन २२ दशमलव २ मेगावाटको माथिल्लो चाकु ‘ए’ आयोजनाबाट पुसभित्रै विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ ।
आफन्तलाई कोसेली आलु ? अनौठो लागे पनि यो यहाँको नियमित चलन हो । इलामबाट आफन्तलाई कोसेली लैजान अनेक मौलिक चीजवस्तु छन् । चियादेखि ललिपप, घीउ, चिज, छुर्पी, किबी फललगायत रैथाने उत्पादन प्रशस्तै छन् ।
करिब एक महिनादेखि अवरुद्ध रसुवागढी नाका जोड्ने सडकमा सोमबारदेखि सवारी साधन सञ्चालनमा आएको छ ।
नेपाली मुद्राको अवैध ओसारपसार हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्त र बरामद रुपैयाँलाई साेमबार पर्सा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउन २०५२ मा जिम्मा पाएको अस्ट्रेलियाली कम्पनी स्मेकले १७ वर्षसम्म लगानी जुटाउन सकेन र सरकारले २०६८ मा कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्‍यो ।
उच्च अदालत इलाम इजलासले निकासी कर नलिन जिल्ला समन्वय समिति झापालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाले सीमा नाका काँकडभिट्टाबाट कर उठाउँदै आएको थियो ।
सोमबार एक अमेरिकी डलर खरिद गर्न १ सय १३ रुपैयाँ ८९ पैसा खर्चिनुपर्ने भएको छ । यो सर्वसाधारणले एक अमेरिकी डलर खरिद गर्न तिर्नुपर्ने रकम हो ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल एवं ग्लोबल एक्सपोजिसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसेजले राजधानीमा १३ औं संस्करण नाडा अटो सो–२०१८ गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्र्योट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ ।
पूर्वी पहाडमा तिहारसम्ममा हवाई सेवा सुरु हुने
पूर्वी पहाडी भेकमा लामो समयदेखि ठप्प हवाई सेवा तिहारसम्ममा पुन: सुरु हुने नेपाल वायु सेवा निगमको विराटनगर स्टेसनले जनाएको छ ।